18 Responses to “အနီရောင်လမ်းကလေး”
စိန်းပန်းတွေလှလိုက်တာ.. အစ်မချောရေ... ဘယ်နားမှာလဲဟင်...
အနီရောင်ကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး၊ သူဟူသူတော့လှပါသည်၊
ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရပါလား။
Is this place in China?
လှတယ် မချောရေ... ဒီလို မျက်စိပသာဒဖြစ်တဲ့ အရာတွေကို သိပ်ချစ်တာပဲဗျ..း))
ရေးတတ်လိုက်တာ... လက်ရာမြောက် ပုံလေးတွေကနေ လှပတဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ချောရဲ့ အနုပညာအားကို မြင်လိုက်ရတယ်။
လောကမှာ အလှဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေရှိသလို
သဘာဝအလှကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေလဲ ရှိနေတတ်တယ်နော်..။
မြသွေးနီလည်း အနီရောင်ကို ကြိုက်တယ် ချောရဲ့..။
အလိုလေး ချစ်မကြီးရေ ဘလော့လေးကိုသတိတရနဲ့ လာလည်လိုက်တော့ အနီရောင်ပွင့်ဖတ်တွေကဆီးကြိုလို့ လှလိုက်တဲ့လမ်းကလေးး))
Hi can you please tell me where is it? So we can visit there.
အနီရောင်လမ်းလေး လျှောက်ချင်စရာပဲ ချောရေ။
ငယ်ငယ်တုန်းက စိန်ပန်းအဖူးထဲက ဝတ်ဆံလေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိတ်ပြီး ဝတ်ဆံပြုတ်တဲ့သူ အရှုံးကစားနည်းလေး ကစားဖူးခဲ့တယ်။
ကဗျာ ဆန်လိုက်တဲ့ လမ်းကလေး... အဲဒါ ဘယ်နေရာလဲဟင် မချော... အဲဒီလို လမ်းလေးပေါ်မှာ တခါလောက်တော့ လမ်းလျှောက်ဖူးချင်မိတယ်...
စိန်ပန်းပင် ဆိုရင် တစ်ပင်ထဲလဲ နှစ်သက်တယ်..
ခုလိုမျိုးများ အပင်တွေအများကြီးမှာ ရဲရဲ နီနေပြီ ဆိုရင်
ပိုပြီးတော့ တောင် နှစ်သစ်မိမယ် ထင်တယ်..
ဓာတ်ပုံတွေကလည်း အရမ်းကို လှတယ်
အရမ်းလှတဲ့ စိန်ပန်းနီ ညီညီလမ်းလေးဘဲ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ကို ကြည်နူးချင်စရာ။ ပန်းမပွင့်ချင်နေ လမ်းဟိုဘက် ဒီဘက် ခပ်စိမ်းစိမ်း အပင်တန်းတွေ ရှိနေရင်တောင် ပျော်ဖို့ ကောင်းလှပြီ။
ဂျက်ကတော့ အဲလိုလှပတဲ့ သဘာဝစစ်စစ်တွေကိုအရမ်းသဘောကျမိတယ်
ပုံတွေကလဲအရမ်းကိုလှတယ် ကျေးဇူးပါရှင် ။
နေရာတိုင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထော်လော်ကန့် လန့်တိုက်နေတဲ့ လူတန်းစားတွေ ရှိတတ်တယ် အစ်မချော။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လူဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက် ဖြောင့်ဖြ။ မရတော့လည်း လွှတ်ပေးထားရုံပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ သူတို့တရားကို သူတို့ စီရင်ပါလိမ့်မယ်လေ။